Uhlalutyo olufutshane lomsebenzi "UDon Juan Tenorio" nguJosé Zorrilla | Uncwadi lwangoku
Uhlalutyo olufutshane lomsebenzi «Don Juan Tenorio» nguJosé Zorrilla
Namhlanje, Usuku lukaValentine, Sikulethela uhlalutyo olufutshane ngebali ledrama yothando, ngakumbi loo mdlalo awubhalileyo UJose Zorrilla kwi1844, "UDon Juan Tenorio". Ukuqonda lo msebenzi wohlobo olunomdla ngakumbi, siza kwazi kancinci malunga nombhali wayo kunye nexesha elibekwe kulo.
1 Umbhali kunye nomxholo
2 "UDon Juan Tenorio"
2.1 Umsebenzi omncinci ...
Umbhali kunye nomxholo
UJosé Zorrilla wayengowosapho lweemfuno zobukumkani kwaye waqalisa izifundo zakhe zomthetho, awazishiya kamva. Waqala ukwaziwa kwisangqa soncwadi emva kokubalisa emngcwabeni ka Larra, ezinye iivesi emangcwabeni ngembeko yakhe. Kunokuthiwa ungomnye wababhali abambalwa belo xesha ababelonwabela udumo ngelixa wayesaphila: waya eFrance kwaye wahlala ithutyana eMexico. Umsebenzi wakhe, ngokuthetha, ujolise kuthando lwesintu.
"UDon Juan Tenorio"
UDon Juan Tenorio: 114 ...
Umdlalo, nangona uthandana nendalo, uboniswa kumabala emidlalo amaninzi kwi Usuku labafile, Ikhefu ngomgaqo wesintu weeyunithi ezi-3. Ibonakaliswa linani lezenzo, ezibonakala zibizwa ngokuba zizihloko. Ubume bayo bangaphandle bohlulwe kabini:
La icandelo lokuqala phuhlisa ulonwabo lomntu kunye nothando.
La Inxalenye yesibini ijolise ikakhulu kwi inkolo kunye namandla angaphezu kwendalo.
Ukunikwa la macandelo mabini ahluke kakhulu, umsebenzi ococekileyo kunye nolwazelelelo ocacileyo wenza indlela.
Omabini la macandelo, ngalinye likhula ngobusuku obunye kwaye kukho umahluko wexesha leminyaka emi-5 phakathi kwabo. Lo msebenzi, olangazelela ixesha elidlulileyo (uphawu oluqhelekileyo lobuRoma bendabuko), ubekwe eSpain kaCarlos V.
Su Umntu ophambili, uDon Juan, ikhona kwi Inkohliso yaseSevilleUngumfana oziphethe kakuhle, okhululekileyo okhohlisa abantu basetyhini, nokuba ungakanani na, ophela ehlala kwindawo engaphaya kwendalo, ngaloo ndlela ekhupha umzuzu wokugqibela womsebenzi, usindiso okanye ukugwetywa okungunaphakade. UJosé Zorrilla, ngokungafaniyo nomsebenzi we-baroque, ugxile kuthando olunye kwaye abonise ophambili, kule meko uDon Juan, oguqukayo kwaye afezekise usindiso ngothando.
Uhlobo lwesibini alulo UDon Luis Mejía, UDon Juan ugqibela ngokubulala kumdlalo. Olu phawu lubonwe njengommeli wesono sikaDon Juan. Ngesi sizathu, ukusweleka kukaLuis Mejía kufanekisela ukuphela kobomi bakhe bangaphambili.
UNksk Ines, umlingiswa ochasene noDon Juan, nguye ozisa ukulunga kunye nobumsulwa emsebenzini. UDoña Inés ngulowo ugoba ububi bukaDon Juan kwaye ubonakala esondele kakhulu kubuthixo: ingelosi yothando ekwaziyo ukusebenza njengomlamli phakathi koThixo nehlabathi. Kuyo, uJosé Zorrilla uzama ukumela inkolelo ekusindisweni komntu, ebonisa ukubaluleka kwayo eluntwini, amaxabiso okulunga kunye nokholo. Kwakhona ukubanakho ukufumana uthando lokwenyani.
Umboniso ovela kumdlalo "uDon Juan Tenorio" ukhokelwe nguBlanca Portillo
Umsebenzi omncinci ...
Ubhejo: Ukubheja kukaDon Juan kunye noDon Luis Mejía, okhuphisana naye, ukuba kwiintsuku ezintandathu uya kumlukuhla u-Doña Inés, umntu osandula ukuqalisa ukuba ngunongendi, kunye no-Doña Ana, oza kutshata no-Don Luis.
UDon Juan uyifezekisile injongo yakhe, kodwa wawa ngothando uthandana noDoña Inés, wamxhwila. U-El Comendador, utata ka-Inés noDon Luis bafuna ukuziphindezela. UDon Juan, emva kokuzama uxolelwaniso olungaphumelelanga kunye nabo, uyababulala kwaye kufuneka abaleke eSeville. Kuxa uDon Juan evakalisa uthando lwakhe lokwenene kuDoña Inés ngaphambi kwale ntlekele. Kungoko le migca idumileyo: Hayi! Akuyinyani na, ingelosi yothando, ukuba kolu lonxweme lucocekileyo inyanga ikhanya kwaye uphefumla ngcono?
Ukufa nosindiso: Xa uDon Juan ebuyela emva kweminyaka emihlanu eSeville, ekhayeni lakhe, kwibhotwe lakhe, waqokelela ipenton eyayigcina amangcwaba kaDon Luis Mejía, uMlawuli, kunye noDoña Inés, owabulawa lusizi. Ekupheleni komdlalo, umfanekiso oqingqiweyo woMlawuli uzama ukurhuqela uJuan esihogweni, kodwa umoya kaDoña Inés uyamlamlela, ngaloo ndlela efezekisa inguquko yakhe kunye nosindiso olungunaphakade.
Ibali elihle lothando ... Ngaphandle kwamathandabuzo.
Sishiye ntoni uncwadi lweRoma eSpain?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Uhlalutyo olufutshane lomsebenzi «Don Juan Tenorio» nguJosé Zorrilla
Ndineminyaka elishumi elinesihlanu ubudala kwaye ndifunda le ncwadi esikolweni. Inomdla kwaye ithatha ingqalelo yam ixesha elide. Kodwa andimthandi kakhulu uDon Juan kuba uzingca kakhulu kwaye ukholelwa ekubeni yonke into esehlabathini inokuthengwa. Ewe, umntu onoluvo oluchasene nam nceda undixelele amazwi akho kule nto.
Andizange ndiyiqonde kakuhle le ncwadi, ngaba uDon Juan wayesazi ukuba imicimbi yangaphakathi yayimisa?
Sonke si shishigang
Phendula uElbas Tardo
kubantu abafana nawe kukuba sinje
Ewe, ngubani omnye? sitsho
Phendula Kulungile, ngubani omnye umntu?
NDINIKEZA UKUFUNDA IFLOGERA KANYE KUFUNEKA NDIYENZE
.................................................. .................................................. .................................................. ..................................... sitsho
Ndineminyaka eli-11 ubudala ndiyifunde eklasini kwaye bandixelele ukuba ndiphande ukuba loluphi uhlobo loncwadi, andicacanga
Impendulo ku ................................................ .................................................. .................................................. ............................................
Sisicatshulwa sothando nesidrama
I-ELSA PORRICO sitsho
IPULENTO EL UMBONGO, SOSAMAFIA
Phendula ELSA PORRICO
Amabinzana angama-30 ngababhali abakhulu malunga nenzondo